Xorriyadda Saxaafadda | Addis Maleda
መነሻ ገጽSoomaaliXalada TaaganXorriyadda Saxaafadda
Waxaa la aaminsan yahay in saxaafaddu ay ka xorowdo dowladnimada iyo qeybaha kale, xoriyadda saxaafadduna ay tahay mid aan la qiyaasi karin.
Itoobiya waxay ka mid tahay dalalka aan xoriyadda saxaafadda la dammaanad qaadin sannado badan.
Itoobiya waxa ay ka mid tahay dalal dhowr ah oo aan xorriyadda saxaafadda siin sannado badan.
Ururka suxufiyiinta aan xuduuda lahayn, oo ah hay’ad caalami ah oo qiimaysa xoriyada saxaafada ee wadamada sanad walba ayaa sheegtay in Itoobiya ay horumar ka samaysay sanadkii la soo dhaafay marka loo eego sanadihii hore.
Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay kooxdan sanadkii hore, Itoobiya ayaa hoos u dhigtay laba boos oo ay ka dhigtay 101 Xoriyadda Saxaafadda.
Ururka Suxufiyiinta Aan Xuduudda Lahayn ayaa si cad u sheegay in xorriyadda saxaafadda oo soo jirtay tan iyo markii uu Ra’iisal Wasaare Abe xukunka qabtay ay halis ku jirto.
Iyadoo kooxdu ay tallaabo wanaagsan ku tilmaantay sii daynta saxafiyiinta iyo shaqsiyaad kale, ayaa haddana waxay sheegtay inay saxaafadda uga soo jeesatay dagaallo ka dhacay deegaanno kala duwan oo Itoobiya ka tirsan.
Ururka Suxufiyiinta Aan Xuduudka Lahayn (RSF) ayaa sheegay in saxafiyiintu ay 70% ka yihiin dadka dunida sanadkii la soo dhaafay, halka saxafiyiintana ay 70% gaadhaan 73 wadan.
Waxa ay sidoo kale ku dhaleeceysay dalalka ka mamnuucaya saxafiyiinta inay tabiyaan faafitaanka fayraska Corona.
Sida lagu sheegay daraasaddan, saxafiyiinta Aasiya, Bariga Dhexe iyo Yurub gaar ahaan waxay ku adag tahay inay soo sheegaan. Waxa uu intaa ku daray in mas’uuliyiin ka tirsan dalal badan ay tabin jireen warar been abuur ah, balse saxafiyiinta ay sixi jireen iyagoo bixinaya warar sugan.
Iran, oo ku jirta kaalinta 174aad ee adduunka sanadka 2021, ayaa loo magacaabay caburin dheeri ah oo lagu hayo xorriyadda saxaafadda.
Madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa ku jira kaalinta 166-aad ee adduunka sababo jira awgeed.
Saxafada ayaa sanadkii shanaad oo xiriir ah gacanta ku heysa Norway, waxaana kusoo xigay Finland iyo Sweden.
Shiinaha ayaa galay kaalinta 17-aad ee dalka Mareykanka, halka Shiinaha uu galay kaalinta 177-aad.
Saddexda waddan ee ugu dambeeya ayaa kala ah Turkmenistan 178-aad, Kuuriyada Waqooyi 179-aad iyo Eritrea 180-aad.
Afrika, Burundi, Sierra Leone, iyo Mali ayaa ka mid ah kuwa ugu bandhigga fiican adduunka.
Dad badan ayaa sheegay in xoriyada saxafada oo Itoobiya sanado badan loo diiday ay horumar ka sameysay xukuumada cusub ee Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed oo xukunka qabtay saddex sano ka hor.
Waxaa Itoobiya ka dhacay isbadalo dhanka saxaafada ah iyo aqoonsi caalami ah oo isbadalka dhacay.
Marka laga soo tago xaqiijinta madax-banaanida saxaafadda Itoobiya, dad badan ayaa sheegaya in ay kaalintooda ka qaadan doonto horumarinta iyo taageeridda saxaafadda.
Si kastaba ha ahaatee, ururka mihnadlayaasha saxaafadu waxay isku raacsan yihiin in xukuumada talada haysa ay si tartiib tartiib ah uga tanaasushay xoriyadii saxaafada ee Itoobiya oo ay ku tumanayso shuruucdeeda walina ay nabad tahay.
Garaacista joogtada ah, af-duubka, xadhiga, iyo qarinta magaca saxafiyiinta xadhigooda ka dib iyo khatarta ka soo noqoshada xoriyada ayaa ah mid caqabad ku ah saxaafada.
Itoobiya ayaa sidoo kale xustay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka iyadoo halku-dhiggiisu yahay saxaafadda adduunka.
Xuska 31-aad ee Xorriyadda Saxaafadda Adduunka oo dhawaan la xusay ayaa lagu xusayay muhiimadda ay leedahay Suxufinimada iyo sida ay Xukuumadda uga go’an tahay Xorriyadda Saxaafadda iyo Ballanqaadkeeda.
Xoriyadoodu waa in ay cod u noqdaan warbaahinta la dulmayo iyo kuwa u xiran saxafadooda oo kaliya iyo kuwa naftooda ku waayay xirfadooda.
Sida la wada ogsoon yahay dalka Itoobiya ayaa ka mid ah dalalka sida joogtada ah loogu xidh-xidho suxufiyiinta Afrika, iyadoo ay weli jiraan suxufiyiin la xidh-xidho.
Ururka mihnadlayaasha warbaahinta Itoobiya ayaa dhankiisa sheegay inay ka walaacsan yihiin xadhiga joogtada ah ee suxufiyiinta.
Waxa kale oo uu sheegay in magacaabista golahan oo ay ku jiraan xad-gudubyo kala duwan oo cad oo aan madmadow ku jirin ay muujinayso dhibaatada ay leedahay in aan lagu dhaqmin xeerkan iyada oo aan la jabin.
Waxa uu sheegay in uu fahamsan yahay in taasi ay meesha ka saarayso kalsoonida ay shacabku ku qabaan golaha sharci dejinta.
Sidoo kale, ururku wuxuu sheegay inay ku adag tahay in la is weydiiyo in Golaha Shacabka uu awood u yeeshay inuu la socdo dhaqan gelinta xeerar iyo qodobbo.
Ururka oo hadalkiisa sii wata ayaa ku nuux nuuxsaday in magacaabista iyo magacaabista xubnaha guddiga loo baahan yahay in si weyn loo saxo, isla markaana la tixgeliyo doorka muhiimka ah ee warbaahinta qaranka.
Ururku waxa kale oo uu walaac ka muujiyey magacaabista xubinta cusub ee Golaha Wakiilada, oo uu doonayo in uu wax ka bedelo. Golaha wakiilada ayaa dib u eegaya
Gudoomiyaha ururka warbaahinta Itoobiya Tibebu Biletu ayaa dhankiisa sheegay in xoriyada saxafada ay soo hagaagtay mudo sanad ah tan iyo markii ay xukuumada cusub talada dalka la wareegtay sadex sano ka hor islamarkaana saxafiyiinta ay si xor ah u shaqeeyaan oo aan la xirin.
Waxa kale oo ay ahayd wakhti guulo waaweyn laga soo hooyey iyadoo dalka Itoobiya laga xusay maalinta xoriyada saxaafada aduunka.
Waxa uu sheegay in sharciga saxaafadda Itoobiya sanado badan la is weydiinayay, balse ay ahayd markii ay xukuumadda cusub talada dalka la wareegtay, sharcigana ay soo diyaariyeen oo ay ansixiyeen khubaro.
Sida uu qabo sharciga saxafada, wariyeyaasha waxaa lagu ganaaxi karaa ilaa 300,000 oo birr, xitaa haddii lagu soo oogo dambi.
Taasi waxay keentay in Itoobiya sannado badan aan lahayn siyaasad warbaahineed, habka qorista iyo hirgelinta siyaasaddana waa mid si fiican loo diiwaan geliyay tan iyo markii ay talada dalka la wareegtay xukuumadda cusub.
Waxa kale oo uu sheegay in saddex sano ka hor ay dawladdu wax ka qaban doonto saxaafadda isla markaana ay ka caawin doonto bixinta cashuuraha marka laga soo tago in warbaahinta la taageero si looga fogaado saamaynta sarifka lacagaha qalaad marka la soo dejiyo agabka kala duwan ee dalalka kale.
Dhanka kale, madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdu ay si tartiib-tartiib ah uga baxayso sharciga, isla markaana la xiro suxufiyiinta, la garaaco oo aan la garanayn meel ay jaan iyo cidhib dhigeen.
Ururka mihnadlayaasha warbaahinta Itoobiya (EMAA) ayaa marar badan xukuumadda ugu baaqay inay saxdo xannibaadaha ka dhanka ah xorriyadda saxaafadda iyo sarreynta sharciga.
Wuxuu sheegay in dowladda soo socota looga baahan yahay inay xoogga saarto sidii saxafiyiinta ay ugu shaqeyn lahaayeen xaaladaha adag, xaqiijinta xoriyadda saxaafadda iyo ilaalinta sharciyadooda.
Sidoo kale, wuxuu xusay in marka laga soo tago ku dhaqanka shuruucda saxaafadda iyo saxaafadda loo baahan yahay in xorriyadda saxaafadda laga saaro marxaladda maanta lagu jiro.
Previous article‹‹የኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግር አሉታዊ አንድምታ ያለው መወቃቀስ ነው››
Next articleአፋር ከሰብዓዊ ቀውስ እስከ “ጦርነት በቃን”
Rajo cusub – ee bukaanada qaba HIV iyo qaaxada
Dillaalinta iyo kiraynta guryaha
Itoobiya iyo kusoo biirinta 5G